ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ အခမဲ့ - ဗီဒီယိုချက်တင်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့!
ရက်စွဲအတွက် အမွ -အကောင်လေးထံမှ -ရက်စွဲအတွက် -အမွ-အကောင်လေးထံမှနေ့စွဲကြီးတွေမြို့တော်ကို-အကြီးတွေမြို့ကနေ-အလေးကြီးတွေမြို့ကနေနေ့စွဲကြီးတွေမြို့တော်ကို-အကြီးတွေမြို့ကနေ-အကောင်လေးမှကြီးတွေမြို့ရက်စွဲမှာအလာက္မ-အကြီးတွေမြို့ကနေ-အကောင်လေးမှကြီးတွေမြို့.
အသီးအသီးအလောင်းအစားတစ်ခုစဉ်းစားသည်ဝယ်ယူ၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေသည်တိုးချဲ့အတွက်အချိန်ရှိနျလှနျကတည်းကနောက်ဆုံးဝယ်ယူ၏အလောင်းအစား။ အဖြစ်-အ၊သင်မြင်နိုင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်လူတိုင်းအိမ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်၊သင်ပင်လျှင်။ မည်သူမဆိုစကားပြောနိုင်သည်။ ရင်းနှီးသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၊အဖြစ်ဖိတ်ဖို့အခြားဆိုင်ချက်တင်အတွက်စက်ဝိုင်းတားမြစ်ကြသည်၊အကြောင်းအလယ်၊အကယ်၍မခံမကောင့်တစ်ခုမှအထက်ပါအပြောင်း။ လျှင်သင်ဤနည်းဥပဒေချိုးဖောက်စေခြင်းငှါ၊သင့်ရဲ့ကိုယ်အဘယ်သူမျှမပြန်အမ်းငွေအဆင့်အတန်းသို့မဟုတ်အဖြစ်မှတားမြစ်ပိတ်ပင်သင့်ရဲ့အကောင့်ကို။ အကြောင်းအရာကြော်ငြာ၏တစ်ဦးအရိပ်အမြွက်လောက်ပေးဆောင်န်ဆောင်မှု၊နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ဖုန်းနံပါတ်များ၊လိပ်စာများမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြစဉ်အမြဲပိတ်ဆို့နေသောရေတွက်မပါဘဲအမ်းငွေသို့မဟုတ်အရွင္းလင္းခ်က္။ အသီးအသီးအလောင်းအစားတစ်ခုစဉ်းစားသည်ဝယ်ယူ၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေသည်တိုးချဲ့အတွက်အချိန်ရှိနျလှနျကတည်းကနောက်ဆုံးဝယ်ယူ၏အလောင်းအစား။
သငျသညျမလုပ်ခဲ့လိုလျှင်လက်ခံရရှိအီးမေးလ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို၊အကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအဖြစ်ရာထူးသင်စေခြင်းငှါသို့မဟုတ်ရှိစေခြင်းငှါသိမ်းပိုက်။ မမေ့မလြော့ပါသတ်မှတ်သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုသွားဖို့ဆိုက်ကြည့်ရှုများအတွက်အမည်မသိလူနှင့်ပေးမ နှင့်စကားဝှက်။ သို့သော်စိတ်ကိုထား၊သင်မြင်အမျိုးမျိုး၊အပူမိန်းကလေးများနှင့်ပင်အဘယ်သို့ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ပုံ။ အဘယ်သူသည်ပထမဦးဆုံးဒီစကားပြောရှိပါတယ်၊မိန္းကေလး၊အရာအားလုံးဒဏ်ငွေနှင့်မသိရပါဘူးအဘယ်သို့သောအမြန်နှုန်းနှင့်မည်သို့ကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပေ၊ဒီလိုနှင့်နိုင်ဘူး၊ငါပြုချင်ကြပါဘူးအေမဖြစ်ဖို့အတွက်စကားပြောပြီးသာအကြောင်း၊အဘယ်သို့ငါအလို၊အဘယ်သို့ငါမပြောနိုင်ပါဘူးငါပည္ဆိုင္ရာအတွက်အဘယ်သို့ငါလို အဘယျသို့သူမဟုတ်ခဲ့၊ငါစိတ်ဓာတ်ကိုမှ၊ဒါပေမယ့်ရယ်လို့မဟုတ်ခဲ့လာရောက်လည်ပတ်၊ထိုအတူငါသည်ရှာမတွေ့နိုင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်အကြောင်းအဘယ်သို့ငါ၊ငါစိတ်ဓာတ်ကိုမှဘာလုပ်နေတယ်နှင့်အတူသူမ၏၊ငါ့အားပြောပြတာပါနောက်တစ်ချက်၊ပြီးတော့အမေကိုယ့်အမြင်၊သောအမှု၌ကိုယ့်ဘဝကိုကလွယ်ကူမယ့်၊ငါသူမ၏ကြည့်ရှုခြင်းငှါငါ့ကိုကဲ့သို့ငါဒီမှာရယ်။
တစ်အသိုင်းအဟာသကပါရဘယ်သူမက်ဆေ့ခ်ျများရှိနေဆဲပိုပြီးအသုံးပြုသူများ၏ဖန်တီးပါပြီ။ ငါလိုထပ်မံ၏ပုံအဟောင်းတဦးတည်းကိုအဘယ်မှာရောက်ဖြစ်တာခွေးများအတွက်၊သို့သော်-အကျွန်ုပ်နှင့်အတူတက်လာပိုကောင်းတစ်ခုခု:တွေ့မြင်လျှင်ဤ၊ငါဖြစ်နိုင်ပြီးသားကန်ဘောမှလွှင့်တင်ပြီးရွေးချယ်ကင္မရာ၊ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်နားထောင်။ သင်ပန္ေကြည့်ရှုရယ်စရာ၊ဆေ့၊သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလိုက်တော့၊မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှု၊ရာနဲ့ စိတ်အခြေအထပို။ ၁ နှစ်အရွယ်မဟုတ်လိမ့်မည်ဘယ်လောက်နားလည်ကြီးခဲ့သောအခါအထင်သေးသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည်မှာနိုင်ငံရေးအယူအပေါက်ကြသည်ရပ်ကိုထိန်းညှိဖို့သင်ညာန်၊ဤအဖြစ်ပါသည်၊နောက်တဖန်အတွေအများကြီး။ လာ၊သွားကြကုန်အံ့။ ငါ့ကိုအဥပမာတစ်ခု။ သူလူကြပ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရူပါရုံ၏အဘယျသို့ဖြစ်သင့်။ ဘယ်မှာသင်ရသင့်သောရူပါရုံကိုအမှန်သည်အဘယ်သို့မာနထောင်လွှား။ သင်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသူအတွက်တူညီသောမှန်ကန်သောလမ်းအတွက်၊ပို့စ်မှန်မှန်ကန်ကန်ညွှန်ပြဖို့အဘက်လောင်ခင္ဗ်ာ။ဥပမာအားဖြင့်၊ထောက်ပြဖို့သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကို။ အမေသည်အလွန်ပျော်ရွှင်အလွန်-အချိန်-သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းငှါအရာအားလုံးကိုကစား-ဘောလုံး၊ကစားစရာအရုပ်။ ဒီမှာ၊သူအကြိုက်ကိုပတ်ပတ်လည်ခိုးနှင့်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းသာ။ ဘာကြောင့်လဲမသိခဲ့ပါ၊ဒါပေမယ့်ထားခဲ့လျှင်သော့နှင့်အတူအခြားအရာဝတ္ထုအတွက်လက်လှမ်းဇုန္၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤသူတို့ကို။ ဒါဟာထွက်လှည့်သောငါ၏အကားသော့အလုပ်လုပ်၊သူမကြိုက်ပါဘူး။ အဘယ်ကြောင့်မနေ့ကကျွန်တော်အရှုံးမပေးဖို့ရှာဖွေနေအဘို့အသော့များအတွက်ဥယျာဉ်တော်၌နှစ်နာရီ။ သူကတောင်ပိုပြီးပျော်စရာအမှောင်ထဲမှာ။ အထူးသဖြင့်မင်္ဂလာအတူမင်းသ၊ဒါကြောင့်လူအတော်များများနှင့်အတူကစားနှင့်သူမ၏အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဂိမ်းတူးတွင်း။ေနောက်ဆုံးအချိန်ကျွန်မကြိုးစားခဲ့ခိုးသွင်းဖို့အတွက်သော့အခုံ။ ဟုတ်ကဲ့၊မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်၊ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်လက်ဝဲသူမ၏ဝါသနာနှင့်ပင်အသုံးပြုအဖြစ်။ အမိန့်သည်ကွပ်မျက်-မီ၊သင်္ဂြိုဟ်ဘောလုံးကို။ ပြီးနောက်အမဲသားကနေဆုတ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုတစ်တစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။ တစ်မျိုးနှင့်အတူစကားလုံးများ၊ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါဟာနောက်သို့လိုက်ရန်အရေးကြီးသော့။ အားလုံးဟိုင်း၊ဤသူကားငါ၏ပထမဦးဆုံးပို့စ်အပေါ်၊ဒါကြောင့်တောင်းပန်လျှင်ပို့စ်ထွက်လာ၏။ ယခုအမှတ်။ ငါ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို ၉ ချိုခန်း ၃ ပတ္အယား နှင့်နံနက်ကြွရှာဖွေနေများအတွက်အနာဂတ်ခင်။ ကံမကောင်းစွာ၊တုန့်ပြန်ဖို့ကောင်းသောအနိမ့်၊ ထွားလာကြသည်နှင့်သူတို့လိုအပိုအာကာသ။ေပထအဖြေကအဲဒီလိုတက်ခူးဖို့တစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်တစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်၊အနံ့။ ဖို့အဆင်သင့်ရောက်လာမှာမြေအောက်ဘူတာရုံ။ ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာသင်ပြောပြရန်အကြောင်းအရာ၊အစားအစာနှင့်။ ကြပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး။ ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုခွေးချင်တဲ့တခါခါသူမကလမ်းလျှောက်သွားခဲ့သည်။ အိပ်မက်၏အကြောင်၊သင်မူကား၊မတည့်။ အခန္းမပါဘူးကြတဲ့အခန်း။ အဘယ်သူမျှမခွေးများအတွက်ငှားရမ်းထားသောတိုက်ခန်း၊ ဒီမတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်မပါဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်။ ပြောကြရလောက်သည်အဘယ်သို့ထင်ရှားနှင့်လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်စုံတစ်ဦးမှသင်အိမ်မှာလုပ်ပါ။ ဤချစ်စရာဝက်အူချောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ထား၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အသိုက်၏သိချင်စိတ်နဲ့ဇွဲနိုင်မှသာငြူ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ငါ၏မိတ်ဆွေ၊လေးနက်စွာရွှေ့ပြောင်းသူအလေးချိန်၊ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကုန်အံ့၊သူ့ကိုဖွင့်ပါ။ အခြားမရှိခြင်းအတွက်၊အရှင်၊ကိုယ့်တည်ဆောက်အကြီးအတွင်းအသစ်စတင်အသွင်။ ကောင်းစွာထွက်အပေါက်၏၊အဆင်းလှ။ သငျသညျရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရရမယ်နှစ်ဘွန်တွင်မှန်ပေါက်များအတွက်။ ချစ်စရာသူတွေယုန်နှင့်ပိတ်။ အဆုံးမှာယုန်၏အကျိုးကျေးဇူးများ။ ကောင်းပြီ၊အပေါ်ကလာရတဲ့အချိန်မှာယုန်အစားအစာတော်တော်လွယ်ကူပါတယ်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ထက်ပို။ အစာကျွေးခြင်းနှင့်မြက်ပင်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်မည်သည့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်။ သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလည်းခတ်။ ငါအပျော်တမ်းအယုန်အကြောင်းအရာ၊ငါကဝန်ခံ။ အင်တာနက်ကိုအကြောင်းပြောပါတယ်ယုန်ရှိပါတယ်၊တကယ်တော့၊အလွန်ညှိုးနွမ်း-ဖော်ရွေမှကျွန်တော်အတွေ့အကြုံ။ ဂီနီဝက်တွေကိုသင့်ချစ်ရသူပင်အဘို့နေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှ ၅ ထောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်ရှေ့တော်၌အ။ ဒါတွေကတကယ်ပျော်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်၊ကျွန်တော်တို့ဟာဂီနီဝက်တွေကို၊တစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်အနည်းဆုံးသူတို့ကနေသူတွေနှင့်ချစ်စရာ။ သူရဲ့အပြောင်နေဆဲနှင့်ချစ်စရာ။ နှင့်ပိတ်။ အများစုကဤအရပ်ဌာန၌၊ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမရရှိနိုင်ပါ။ ကြွက်များ-တိရစ္ဆာန်များ။ သူတို့အဖို့လွယ်ကူအောင်၊အလွန်လူပေါင်းကောင်းသောနှင့်ချစ်လိုတူအချိန်ဖြုန်းဖို့။ သင်လိုအပ်ကြီးမားသောလှောင်အိမ်နှင့်အစားအစာမှမည်သည့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်။ နည်းချက်များ:နည်းငယ်ကြွက်။ ရွားအသေးစား၊တိရိစ္ဆာန်နှင့်အတူလျော့။ အများဆုံးမှာ၊သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကိစ္စများတွင်။ ပါကကြွက်နှင့်ကြွက်များ၏လူမှုရေးသတ္တဝါနှင့်မိမိတို့အဘို့လိုအပ်ကြောင်းအဆိုပါကုမ္ပဏီသူတို့၏အဖော်။ သင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်ဖို့ခံယူ၊ဒီအမ်ိဳးသားအတွဲများအတွက်သင့်လျော်သောမဟုတ်။ စုံတွဲတစ်တွဲအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာမည်ပေးတဲ့လူဦးရေပေါက်ကွဲမှုအတွက်ဆဲလ်၊ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံး-တစ်ခုတည်းလူ့အဖွဲ့အစည်း။ ရေမှနှစ်ခုအဖြစ်အများအပြားဆဲလ်အရွယ်အစားကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ခြောက်နှင့်တစ်ဝက်တစ်ဂရမ်၏ဇယွင်းဖြစ်စေသောကြွက်မှရွှေ့တယ်ဗျ။ အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုပြောပြပါအနံ့လျော့နည်းပုံမှန် ကြွက်နှင့်အတူ။ တစ်ဦးကြွက်အတွက်ကျွန်မရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကို။ သေးငယ်သောသူတို့ကိုမလွန်အသိဉာဏ်ရှိသော၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကအဆင်းလှ၊ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်လွယ်ကူပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ကောင်းစွာပါတယ္။ ၍လေ့လာဖြစ်ကပ်ပါးကောင်၊ဒါပေမဲ့သူတို့လိုပဲအနားမှာရှောက်သွား။ အများအပြားရှိပါတယ်တခုနှင့်အရောင်အဆင်း။ ဘာစပ္ထားသူတို့အကြောင်းသူတို့အဖို့လွယ်ကူအောင်နှင့်အတူပျော်ရွှင်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုနှစ်ခြေထောက်တွေ။ နှင့်အတိုက်အပေါ်အမြီး။ မေတ္တာကိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု။ ဒါကြောင့်ကြွက်တစ်တကယ်တော့၊ပိုပြီးတူကြက်သားနှင့်အတူဆေးထိုးအပ်၊ကိုယ့်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ဒါဟာပင်ထူးဆန်းသောဤကောင်လေးတွေဟာအမှတ်မထင်၊ဆွဲယူ၊များသောအားဖြင့်အားလုံးပျက်သောသူတို့အား။ ဒါဟာရယ်စရာကောင်းရဲ့သောသူ၏အမှု၌အန္တရာယ်၊အရေပြားကိုဖယ်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ဟုတ်ကဲ့၊အတော်လေး။ ဤကြောက်မက်ဘွယ်သောပျက်အဘယ်အရာကိုမျှဖြစ်ပျက်၊ဇာတ်သိမ်းအတွက်အစွမ်းသူများ၊ဒါကြောင့်အရာအားလုံးပြန်ပြည့်အဝ။ အထွေထွေအတွက်သဘာဝအပေါ်အာရုံစူးစိုက်၊ဒါကြောင့်အလွန်မနှစ်မြို့ဖွယ်။ သို့မဟုတ်ရပ်ဖြတ်လည်ချောင်းအပေါ်ဆေးထိုးအပ်၊သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်မြီးအမြီးအမည်မပေါက်ပြန်၊သို့မဟုတ်ပင်သွန်းလောင်းခြင်းမရှိဘဲအသားအရေ။ နူးညံ့သောသည်အကောင်းဆုံးမှကျန်ရစ်။ ကြွက်နှင့်အတူလုံလောက်တဲ့။ ဒီနေဆဲသိသာအခါ သူတို့ဖျက်ဆီးဂျစ်သင်္ချိုင်း။ ယဉ်တို့ကို၊သူတို့မကိုက်။ အဘို့အလိုငှါအလွ၊ခၚမြည်းစမ်းပရိုတိန်း၊သို့သော်အဘယ်အရာအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်။ မီ၊အမေရိကန်။ ဘဝထဲမှာ ၆-၁၀။ သည်လူမှုရေး၊ရိုးသားတွက်၎င်းအစားအသောက်သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတိုးဆိုင် ဘော်၊လူမှုရေးနှင့်အသိဉာဏ်။ စကားမစပ်၊ဤအိမ်အများမဟုတ်ကြ။ ငါ၏တစျခုလုံးကိုအကျွမ်းနှင့်အတူ ကန့်သတ်သည်ထူးဆန်းတဲ့ဆောင်းတွင်းကြုံတွေ့နှင့်အတူကြွက်နှင့်အတူမှေးမြီးကြိုးဆွဲနေတစ်ချောင်း။ ငါအကြောင်းရေးဖို့ပါလိမ့်မယ်အ ။ သူငယ်တွင်အမွေးခန်းအလွန်ကြီးစွာသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ။ ရေပန်းစားသောဒဏ္ဍာရီမှဆန့်ကျင်ခြင်း၊မရှက်တတ်။ မာႏ်ဴ အလူပေါင်းကောင်းသောနှင့် ။ သင်လိုအပ်အကြီးကင်မရာဒါမှမဟုတ်ဟန်ပြအရင်ကကင်မရာတစ်ခုကိုသင်မြင်ရပါလိမ့်မည်သဲနဲ့ဟေအိမ်တော်ပတ်လည်-ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့သြစတြေးလျအမှိုက်သရိုက်နှင့်အတူကြီးမားသောရိုးသားတယ္။ အပျော့ပျောင်းသောသည်အထိကလေးတစ်ဦး၏သူပျံသန်းနိုင်သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသကြားဓာတ်ပရိုတိန်း။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ငါးအသားကိုခြံ။ ပထမဦးဆုံး၊သူကတစ်ဦးသူနာပြုနှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားစားတတ်၏၊နှင့်ဒုတိယ၊သူတို့ခွေးရူးပြန်ရောဂါမှဆင်းရဲခံရ။ ဒါပေမယ့်အထောင်အတွက် အဖြူကောင်အိမ်အတွက်စိုက်ပျိုးနွားစေသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုသောသူတို့အဘို့ပြုခြင်းငှါမကြိုက်မာက္ဖို။ ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝသက်တမ်းသည်ငါးနှစ်။ သတိရ:ဒါကြောင့်ပဲအကျပ်ဇီးရရှိကြောင်းသင်နှောင့်ရှက်သို့။ သင်တို့နှင့်အတူအကြီး-အအများစုဟာရိုးသားစွာဘလော့ဂ်အကြောင်းကိုအဘယ်ကြောင့်သင်ကမလိုအပ်ပါဘူးမွေးတိရစ္ဆာန်များ။ မဆိုအမှု၌၊ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီ၊အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်ရင်းမြစ်သို့မဟုတ်နှင့်အတူတိုင်ပင်အ ၊အဘယ်သူသည်အစဉ်အမြဲကြီးတစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်ကျွန်တော့ကလေးဘဝ။ ၊၊၊ယုန်၊ဂီနီဝက်နှင့်ပင်တစ်ဦးတန်ဆာကြက်နှင့်အတူ။ ယခုငါပြင်းပြီးတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦး။ ငါရှိသည်တယောက်ကိုအမြဲတမ်း၊နှင့်ဒုတိယအ၊အထွေထွေအတွက်၊အမွေးကလေးအနီး၊အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေမိသားစု။ အတူကျပ်နေကြတယ်ချည်သော ။ အပြည့်အဝ၊မျက်စိ၏ထွက်အာရုံစိုက်။ အဘို့အကြံပြုသည်မဟုတ်ကေလး ၃ အသက်အရွယ်အနှစ်။.
စာရင်းဇယားပြပွဲကြောင်းအများအပြားသူတို့တစ်ယောက်ရောက်လာမှအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်:ရှာဖွေနေလူတစ်ဦးကနေ ၊အစီအစဉ်ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ အားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးဆိုက်ပေါ်တွင်၊သင်သည်လည်းရှာဖွေတစ်စုံတစ်ယောက်သည်အဘယ်သူ၏အိပ်မက်တွင်၊တကယ်တော့သည်ခံစားရသောအားဖြင့်လူသန်းပေါင်းများစွာအပါအဝင်၊နေထိုင်သူအများစုကတော့ဒီဒဏ္ဍာရီမြို့ပင်လယ်နက်အပေါ်။မွာင္ၿသင်္ဘောသားများ၊ဆရာဝန်များ၊ကြွက်သားအားကစားသမား၊ရယ်စရာလူ၊ကျောင်းသားများ၊အချစ်ကဗျာတို့တွင်အသင်သည်ထိုသူတို့အဖို့သေချာရှာသောသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်ပျော်ရွှင်စေလိမ့်မည်။
ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်မှာအွန်လိုင်း ၊အတိအကျဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ပါတယ်၊နှင့်အသုံးပြုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်။ ယခုအတွက်ညွှန်ပြ၏လျှောက်လွှာကိုသင့်သောကိုက်ညီတဲ့သင့်ရဲ့အနာဂတ်လက်တွဲဖော်။ ဤနိုင်ပါတယ်:အသက်အရွယ်၊အမြင့်၊အလေးချိန်၊မျက်လုံးအရောင်၊ဇာတ်ကောင်စရိုက်၊အလုပ္အကိုင္၊ဝါသနာ၊အရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ၊အများကြီးပို။ ဆိုက်ကိုအမည်ရွေးပါကာကပွဲများသင့်ရဲ့စံသတ်မှတ်။ အတွေ့ဆုံအဖြစ်ဆိုးဝါး။
ထိုမြေပုံသည်လက်တွေ့ကျတဲ့ကိရိယာကိုအသုံးပြုသူ၏၊အတူအရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်အခြေခံပညာစစ်ဆင်ရေးကိုဦးဆောင်ရန်အတြင္းချက်တင်စာမျက်နှာများတွင်။ ဂီတအတွက်အားလုံးအမျိုးအသင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း။ နားထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လယ်ဓားပြဒီယိုများ၊အကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များသည်အာမခံချက်။ ဖော်ပြအချက်အလက်အသုံးပြုသူများနှင့်ပတ်သက်၊ဟာသ၊မကြာသေးမီဖိုရမ်အကြောင်းအရာရှိတယ်၊နှင့်စာရင်းဇယားထံမှ။ ဒီနေရာမှာသင်ဆက်သွယ်နိုင်အချက်တင်ကနေတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပုံစံ။ကျနော်တို့မျှော်လင့်တိကျတဲ့တောင်းဆိုမှုများနှင့်အကြံပြုချက်များ။ အားလုံးကမ်းလှမ်းချက်အလိုအလျှောက်အသက်ဆိင်ရာအချုပ်ရေးမှူးသည်။ ဒီနေရာမှာသင်ရေးသားနိုင်မှကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေး၊တာင္းပိုဆောင်းအချက်အလက်၊စသည်တို့ကို။ ကျနော်တို့တုံ့ပြန်ရန်အီးမေးလ်လိပ်စာသင်အတွက်သတ်မှတ်အလယ်
၁။ အရေအတွက်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများအပေါ်ဆိုဒ်အများအပြားသန်း။ သူတို့တွင်သာအိမ်တွင်နေထိုင်လူတွေက ၊အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားမြို့ကြီးများ၏ရုရှားနှင့်ပြည်ပမှာ၊အဘယ်သူသည်စိတ်ရင်းမှန်ချင်မှလူသစ်ဖြည့်ဆည်း။ ၂။ လက်တွေ့ကျတဲ့အဖော်ရှာစနစ်အပေါ်အခြေခံပြီးအရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်ချက်များ၊ကဲ့သို့:ပြင်ပဒေတာ၊ဇာတ်ကောင်စရိုက်များ၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တည်းဖြတ်၊ပညာေရးအဆင့်၊ဝါသနာ၊စသည်တို့ကို။ င်း၏နှင့်အတူကိုကူညီ၊သငျသညျအတှေ့ဖို့သေချာတဲ့သဘောဖော်၊မိတ်ဆွေ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက်အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်တစ်ပေါက်ဘော်စိတ်ဝိညာဉ်။ ၃။ ဆွဲဆောင်မှု။ သူ့အဆိုအရ၊သုံးစွဲသူများ၏အများစုအဘယ်သူတက်ထားပြီ၊သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်ဆိုဒ်မှဖွားအသစ်အစည်းအဝေး၊အထူးသဖြင့်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာနောက်ဆုံးမှာကနေရွှေ့အတုကိုအစစ်အမှန်။ မှတ်ပုံတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုရိုးရှင်းပြီးအလိုအလျောက်။ တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုက်ရဲ့အသုံးပြုသူများနှင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှ ၊ဒါဟာထက်မပိုယူပါလိမ့်မယ်ငါးမိနစ်။ မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်နှင့်ဖြည့်စွက်အမေးခွန်းလွှာ၊သငျသညျနိုင်လိမ့်မည်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်၊ဆွေးနွေး၊အမြင်နှင့်မှတ်ချက်၊ဓါတ်ပုံပေါ်တင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများ၊နှင့်စောင့်ရှောက်အတုမဂ္ဂဇင်း။ အသစ်အစည်းအဝေး သူတို့ကျိန်းသေအစအဦး၏တစ်ဦးချစ်ကြည်သို့မဟုတ်မေတ္တာဆက်ဆံရေး၊သင်တို့အဘို့အပြီးငါပေးမည်၊သင်တို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်း။
စကားပြောထောက်ပံ့ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းကိုဆက်သွယ်မည်ဝှက်ဖြင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအပေါ်နှင့်ဝဘ်။ ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအောင်မြင်သည်သုံးတဲ့အထူးစီစစ္ျယန္တရား:လက်လှမ်းချက်တင်ရရှိနိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ၊အလျှင်၊သငျသညျမတော်တဆဝင်အလယ်၊အတုနှင့်နံပါတ်များအတွက်။ စကားပြောပေးအခွင့်အလမ်းများအတွက်အမည်မသိဆက်သွယ်ရေးကနေမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ဝဘ်။ ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအောင်မြင်သည်သုံးတဲ့အထူးစီစစ္ျယန္တရား:ဝင်ရောက်ရန်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သည့်အခါ၊သင်ရိုက်ထည့်တဲ့လယ်ပြင်အဘို့အ၊အအမည်ပြောင်နှင့်နံပါတ်များဖြစ်ကြောင်းကျပန်းထုတ်လုပ်။
ငါ့နာမသည်ဒါဝိဒ်၊ငါ ၃၉ အသက်အနှစ်၊ငါဗ်မြို့မှသူများတည်း၊ငါသည်ငါ့ကုမ္ပဏီ၏လယ်ပြင်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု-၃၃ နှစ်အရွယ်တိုးတက်မှုနှုန်းသည် ၁၇၁ နှစ်အရွယ်ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကတယ္။၊ ငါ၏စုံတွဲတစ်တွဲကီလို၊ရုန်းကန်။ မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ရတဲ့၏ဝယ်ယူကြသည်မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်မျှော်လင့်ချက်အစည်းအဝေး၏၄၀-၅၂ အသက်အနှစ်၊ကောင်း၏၊ကောင်း၏၊ယုံကြည်သောဘုရားသခင်၌ရွှင်လန်းသော၊တာဝန်ရှိသော၊အဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်၊လွတ်လပ်သော၊ငါခဲတဲ့ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့။ကျွန်မမဆုံးရှုံးပါဘူးမျှော်လင့်ချက်အတွက်အစည်းအဝေးတစ်ခုနှင့်အတူတစ်ဦးကိုခစျြတစျခု၊ပျော်ရွှင်မှုအတွက်၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊
ထိ ၊နီးပါးအတွက်စက်တင်ဘာလမှပြောင်းရွှေ့ ။ ဘတ်။ ငါလိုလူကိုရှာဖွေဖို့ပြောဖို့ပထမဦးဆုံး၊ပြီးတော့အလုပ်သင်ချင်သမျှကို။ ၁၉ နှစ်အရွယ်မိန်းမငယ်။ ငါ၏အသွင်အပြင်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်မြင့်-၁။၆၈-၁။၇၀၊တိုတောင်းသောဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်၊အခါအားလျော်ပြန်လာပြီး ၂၀၀၇-အိုး။ ငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်လူအလိုအလျောက်၊မကြောက်ခြင်း၊မျက်နှာအင်္ဂါများမှာကဲ့သို့သာယာသောအတွက်ရှာ၏ နှင့်စာတတ်ေြမာက်မှု၏အ ။ -။ ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ငါသည်ခုနစ်။ ခုနစ်။ ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး၊ဒါပေမယ့်ဒါရိုက်တာရှေးခယျြနိုငျကြောင်းငါကောင်းစွာပညာတတ်များနှင့်ပညာတတ်များအတွက်လုံလောက်လူငယ်တစ်ဦးလူတစ်ဦးအထူးသဖြင့်။ ယူသူတို့အရက်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုအတွက်သမ္မတ၊ ဖြစ်လာကြပြီမဟုတ်သောကြောင့်ဖက်ရှင်ဖက်ရှင်၊ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်အလိုဆန္ဒရှိသည်ဖို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်။ စာရေးဝါသနာများနှင့်ဝါသနာများ၊ဒါပေမယ့်မကြာခဏဖျားနာ။ ဤအဖြစ်သာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများ၏အဘယ်သို့ငါပြောနိုင်ပါတယ်။
သူတို့သံသယသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး။ ဒီနေရာမှာသက်သေအထောက်အထားရှိသည်သောအညာဘက်ကိုရှာတွေ့ဖို့ အီတလီ
မှကြွလာသောအခါဤသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်လူတစ်ဦး၊အကောက်ခွန်၏ သည်အစဉ်အမြဲဖြတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူ:"သင်သိလျှင်၊သင်တို့သိသူရဲ့အထီးကျန်ဆန်။အားလုံးရဲ့ကောင်းကောင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့လိုအပ်ရာတစ်ခုခုပိုတိကျတဲ့၊စင်ကြယ်သောလုိက္တယ္။"ထို့ကြောင့်၊ကျနော်တို့များအတွက်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနိုင်ငံများနှင့်မိတ်ဖက်၊အမေးပေးစေခြင်းငှါအန္တရာယ်အရိပ်အမြွက် အပေါ်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်ညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူအဖီး။ လျှင်ရှစ်ပါးသောဤအ၊သင်သေချာပါစေ၊သူတို့မှန်ကန်သောသို့မဟုတ်မှန်ကန်သော။ သင်သိသည်အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ခံစားရရန်လိုအပ်ပါတယ်ချစ်လျှင်ပင်၊သူတို့အခြားလိုအပ်ချက်များကို။ အချို့လူများကိုချစ်၏ခံစားရသည့်အခါသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကမ်းလှမ်း၊သင်ကကော်ဖီခွက်ကိုအတွက်မနက်တိုင်းအိပ်ရာ။ အချို့၊အခြားလက်ပေါ်၊သင်လုပ်ချင်မှခံစားရကြောင်းဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲအံ့သြဖွယ်စောင့်ကြည့်ဖို့။ အခြားသူများများသောအားဖြင့်အများကြီးမလိုအပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစိုက်။ အမှန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကိုငှါကြွလာသောအခါပေးကမ်းခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းမေတ္တာသည်:"ကျနော်တို့ကလိုအပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုသွန်သင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ရန်၊မလိုအပ်သူ့ကိုမှဖတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံအစည်၊"အကြံပေးသည်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူ ။ နယ်လ်ဆင်၊"ခင်ဗျားညာဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူအခါသူဆိုတာကသူ့အချစ်ရသူခံစားရနှင့်ပွေ့သူ့ကိုအလမ်းကိုသင်စေချင်တယ်။"ဒါကြောင့်သင့်အဘို့အတူတူ။"ပဋိပကၡဟာသဘာဝတ ၏အစိတ်အပိုင်းမည်သည့်ဆက်ဆံရေး။"ဒါပေမဲ့၊အဖြစ်နှင့်အတူဖြေရှင်းပဋိပက၊ဒီအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ရှိမရှိဆက်လက်လိမ့်မည်အချိန်အကြာမ:"အနည်းအခုတော့၊၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအတွက်အပြုအမူ၊အကြောင်းအများကြီးကပြောပါတယ်ဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်အနာဂတ်အဘယ်သို့ရိုးရှင်းစွာသူတို့ကိုဖြေရှင်းဖို့၊"ရေးသားခဲ့သည်ဟုတ္တယ္မ:"သင်တစ်ဦးကျန်းမာတဲ့အတွက်ဆက်ဆံရေး၊နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်ငြင်းခုံ။"အခြားစကားများတွင်၊မကျိန်ဆိုနှင့်ကြွေးကြော်နှင့်အလျှင်းပြုပါရန်အခြားသူများ။ခံစားမှုရောဂါခံစားနေရပြီးလိင်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်၊အများကြီးအာဏာကိုနဲ့တူဘာမှမရှိဘူး၊"ေျပာအုိင္ရီးစ္ဟာ ၊စာရေးဆရာ။"အကြင်အတွင်းအလင်းမီးသီးမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်၊သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားနှင့်ပင်အပြန်အလှန်၊သင်ကျိန်းသေကယ်တင်ပါ။ နှစ်ဦးစလုံးကွဲပြားခြားနားပါစေရန်လုံလောက်သောကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ၊ဒါပေမဲ့သူတို့အပေါ်တူညီသောလှိုင်းအလျားအခါရောက်လာ။ ဆွဲဆောင်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမတစ်ချက်မှာ၊ဒီပုံရပေမည်ကဲ့သို့အမဲ၊ဒါပေမယ့်မလိုအပ်တဲ့အာမခံအချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်အသီးအနှံ။ တကယ်တော့၊ ကြောင်းလေ့လာမှုများကအများအများဆုံး တစ်ဦးအားကြီးသောဆက်ဆံရေးကတည်ဆောက်အပေါ်အလားတူတန်ဖိုးများနှင့်အတွေးအခေါ်:"ဒါဟာလုံးဝပုံမှန်၊အရုပ်ရှင်များအတွက်-နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအရသာ၊ဒါပေမယ့်သာအလားတူအခြေခံသဘောတရားအတွက်အသက်(ကဲ့သို့ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု၊မှဝင်ရောက်ခွဘာသာ၊သို့မဟုတ်စိတ်ကူး၏သားသမီးပြုစုပျိုးထောင်)နှိုးဆော်လူများအတွက်အတူတကွ။အဘယ်သူမျှမနေပါစေအဘယျသို့ပုန်နှလုံးရဲ့အချိန်ပြောပြသင်၊သင့်မိသားစု၊အရေးအပါဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အသက်တာအတွက်၊အရေးပါ။မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုမကြာခဏပိုပြီးရည်မှန်းချက်၏မြင်ကွင်းသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်သင်တို့ပြုထက်၊"သူသည်ကရှင်းပြသည်၊"နှင့်၎င်းတို့၏ထောက်ခံမှုထောင်ပြုခြင်းပြီးနောက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါသည်။"ကျနော်တို့ကြောင်းသိရှိမောင်၊မိဘ၊မိခင်ယောက္ခမများ၊ဆွေမျိုးသားချင်းနှင့်မိတ်ဆွေများကိုနေသောအများကြီးလွယ်ကူကူညီပံ့ပိုးရန်အကွာအဝေးကနေပေါ်ထက်ပို။"စုံတွဲများအဆက်ဆက်ရှိဆက်ဆံရေးအကြောင်းပေါင်းစပ်နိုင်သဘောဆောင်သော၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့လိင်တူချစ်၊အကောင်းဆုံးစာရွက်အဘို့အကောင်းလိင်၊ပင်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်၊အမြဲတမ်းအသစ်အလေ့အကျင့်၏ညည်းက အစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ကြောင့်အခြားသူများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ဖို့လုံလောက်လုံးဝခံစားရပါကျဆင်းသွား၊"ဟု ။ ဆူးဂျွန်ဆင်၊လက်တွေ့စိတ်ပညာနှင့်စာရေးသူ၏အချစ်စိတ်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်အမျိုးမျိုး။ ကျေနပ်ပူးပေါင်းအပေါ်အခြေခံသည်အလိုဆန္ဒကိုဖြစ်စေဆက်ဆံရေးကောင်း၊မဟုတ်ကိုအဘယ်အရာကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်:"အဘယ်သူလူတစ်ဦးအဘို့အကြည့်ရှုသင့်တစ်ဖက်မီ၏မြင်ကွင်းစောင့်ရှောက်သင့်တယ်သူတို့ရဲ့မျက်စိပွင့်လင်းဘို့အအမျိုးအစားများ'၊'ငါ'သူထင်နှင့်ပြုမူ၊"အားအကြံပေး၊"သူတစ်ပါးအ ၏အိပ်မက်နှင့်တန်ဖိုးများ၊ပြောသောသူ၊ရန်ဆန္ဒရှိထား၏ဆက်ဆံရေးထက်သူတို့ရဲ့လိုအပ်သည်။"အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများအဘယ်သူသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အနက္ေရာင္အားပျော်ရွှင်ကျားမအတွက်အလိပ်။"ဗင်္ယာမိန်သား၊၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူအဆိုပါအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်း၊အမှတ်ထွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အရေးသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက်လွဲချော်ခံရသောအခါပျက်ကွက်:"ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု'ထွက်၏၊မျက်မှောက်ထွက်၏နှလုံး'ဖြစ်ပျက်၊ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး"ဟုရှင်းပြသည်။"ဒါပေမယ့်တဲ့အခါအုတ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိတ်ဖို့ အခြားပုဂ္ဂိုလ်၊အခါမဟုတ်၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးနိမိတ်လက္ခဏာကိုသူအမှန်တကယ်ဖြစ်ချင်သူနှင့်အတူ။လို့အရိုးအနမ်းများ၏ရှေ့မှောက်၌အဆင္၊အထား၏စကားကိုဓာတ်ပုံပြခန်းသောအမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေပေါ်အကြောင်းကိုမသိကြပါ။"ဒီနေရာမှာသက်သေအထောက်အထားရှိသည်သောမတ်မှုအရာကိုရှာဖွေရန်၊အမျိုးသမီး၊သူတို့ရဲ့အလောင်းကောင်အကြောင်းအမျိုးသမီးမသိရပါဘူးငါခံယူအရေးပါဆုံး၏အဆောင်းပါးများနှင့်ဘလော့ဂ်ဘာသာတစ်နေ့လျှင်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်။ သတင်းလွှာ၊ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာ။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူ
အဘယ်ကြောင့်ငါမြင်ရဤစာမျက်နှာကို? ဤစာမျက်နှာကိုခဲ့သည်အလျှောက်ဖန်တီး။ အထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်တစ်ခုချင်းစီသစ်ကိုဒိုမိန်းနဲ့ပြသကြောင်းအသစ်တွေကိုဒိုမိန်းအရာက္တဲ့ေ။ ဒီမပါဘဲပညာ၊ဧည့်လက်ခံရရှိမယ်လို့အမှားမည္။ အဖြစ်ဖောက်သည်အမေရိကန်-ဒိုမိန်း၊သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဤဒိုမိန်းအတွက်အသင့်ရဲ့ဒိုမိန်းအစုစုအချိန်တွင်မဆိုအွန်လိုင်း(ဥပမာ၊ဝဘ်ညႊန္၊အီးေမးလ္ခ်ိန္ၫ၊ဝဘ်အာစာအုပ္၊)။ ဤစာမျက်နှာကိုခဲ့သည်အလျှောက်ဖန်တီး။ အထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်တစ်ခုချင်းစီသစ်ကိုဒိုမိန်းနဲ့ပြသကြောင်းအသစ်တွေကိုဒိုမိန်းအရာက္တဲ့ေ။ ဒီမပါဘဲပညာ၊ဧည့်လက်ခံရရှိမယ်လို့အမှားမည္။ အဖြစ်ဖောက်သည်အမေရိကန်-ဒိုမိန်း၊သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဤဒိုမိန်းအတွက်သင့်ရဲ့အချိန်တွင်မဆိုအွန်လိုင်း။
ငါသည်အသက်ရှင်သောအခုဂျာမနီမှာဒီနေရာကိုလာပြီးအနှစ်၊အောင်ကြိုးစားနေအကျွမ်းနှင့်အတူ၊ဒါပေမယ့်မရှိ။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်သေးငယ်တဲ့မြို့အခါသင်ဖြတ်လျှောက်လမ်း၏အထင်တော့တာ္(နှင့်အဘိုးအဘွား)။ သွားအကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ခလုတ်လည်းရှိပါတယ်အဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန်သင်ယူဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာ၊ငါလုပ်သော်လည်း၊ဘမ်းချို့အားဖြင့်ရှုံ့။ ရှိပြီးသားအတွေ့အကြုံ၊ဒါပေမယ့်ငါ ၊အချို့တို့သည်အမည်မဲ့သို့မဟုတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ငွေမပါဘဲ။ အကြံပေး၊အဘယ်သူသည်အသက်တာအတွက်ဂျာမ။ ငါသည်အသက်ရှင်သောအခုဂျာမနီမှာဒီနေရာကိုလာပြီးအနှစ်၊အောင်ကြိုးစားနေအကျွမ်းနှင့်အတူ၊ဒါပေမယ့်မရှိ။ ငါအသက်ရှင်သောအတွက်သေးငယ်တဲ့မြို့အခါသင်ဖြတ်လျှောက်လမ်း၏အထင်တော့တာ္(နှင့်အဘိုးအဘွား)။ သွားအကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ခလုတ်လည်းရှိပါတယ်အဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန်သင်ယူဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာ၊ငါလုပ်သော်လည်း၊ဘမ်းချို့အားဖြင့်ရှုံ့။ ရှိပြီးသားအတွေ့အကြုံ၊ဒါပေမယ့်ငါ ၊အချို့တို့သည်အမည်မဲ့သို့မဟုတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ငွေမပါဘဲ။ အကြံပေး၊အဘယ်သူသည်အသက်တာအတွက်ဂျာမ။
မီယံကြော်ငြာများပြသနေသောအတွင်းပေးဆောင်ကာလကာလအတွက်အထူးလုပ်ကွက်၏စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကို၊တိုင်းခန်း၊နှင့်အဓိကအစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြော်ငြာ။ သွားသင့်အကောင့်မှ၊အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ"အပိုဆောင်းန်ဆောင်မှု"(၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းအပေါ်အနူး)။ ရွေးကြော်ငြာချင်ယံနှိပ်ပါအပိုဆောင်းန်ဆောင်မှု၊နှင့်ထိုအခါ၌-'အောင်ယံ'-အဆိုပါဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်စာမျက်နှာနှင့်အတူရွေးချယ်စရာ၏ငွေပေးချေမှုစနစ်။ ရွေးအဆင်ပြေတဲ့ငွေပေးချေမှုစနစ်နှင့်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအဘို့အငွေပေးချေ။ ငွေပေးချေမှုပြီးနောက်၊သင်သည်သင်၏ကြော်ငြာကြလိမ့်မည်မီယံ။
ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လာျ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲတားမြစ်ထားသည်။ အားလုံးလှုပ်ရှားမှုများဖို့ဘာသာရပ်များမှာစောင့်ကြည့်။ ဤစာမျက်နှာကိုမဆံ့မပါဘူးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံအစည်းအဝေး။ ယခုပိတ်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်နှိပ်ပါအမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည့်အလင့်ထားသည်သင့်ရဲ့အဖွဲ့စေလွှတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်။ ဒီလမ်းညွှန်ချက်ကိုအကျဉ်းချုံးဖော်ပြဖို့ဘယ်လိုများအတွက်မှတ်ပုံတင်လာျ။။။။။ သင်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းအတွက်အသုံးပြုသင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စကားဝှက်ကို၊ထို့နောက်ကိုနှိပ်ပါ"မှတ်တမ်းအဖြစ်"နက်ဖြန်မှသင်လုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုမှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။။။။။ (သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်နိုင်မှမှတ်ပုံတင်အခြားလူများမှပါဝင်ဖြစ်အပျက်အတွက်၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်အဖြစ်အပျက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ အပေါ်မှတ်ပုံတင်မ်က္ႏွာျပင္၊လိုအပ်သောလျှင်၊တိကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အပျက်(သို့မဟုတ်လူတစ်ဦးသင်မှတ်ပုံတင်များအတွက်)သင်ချင်သောတက်ရောက်ရန်။ ကိုနှိပ်ပါ"နောက်တစ်ခု"ဆက်ပြီးမှ။ ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားနိုင်ပါကြောင်းအပြင်ဤအချက်အလက်နောက်ပိုင်းလျှင်သင့်ရဲ့စီးနင်းအပြောင်းအလဲသတင်းအချက်အလက်။ နောက်ဆက်လက်အသီးအသီးဖြစ်ရပ်အနေနဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲအတွက်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း။ သင်တွေ့လိမ့်မည်ဤအတွက်ရက်စွဲတစ်ခုအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိမှအစည်းအဝေးအစီစဥ္သူ၊အရာကိုလည်းပါဝင်မှလင့်ခ်များအတွက်မှတ်ပုံတင်။။။။။ ဒီပြီးနောက်၊မည်သည့်သစ်ကိုမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲရိွေမှတ်ပုံတင်ရင်ခံ အကြောင်းကြားအစည်းအဝေးစဥ္သူအီးမေးလ်ဖြင့်အခါတစ်ဦးမိတ္တူကိုအစည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။
ကိုယ်ဝန်များ၊သင်ျ၊အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၊လူမှုနိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များအတွက်ရန္။ ဒါဟာပိုပြီးအရေးကြီးသည့်အခါဆွေးနွေးလူထုအတွက်-နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ရှုထောင့်။ ကောင်းမည္ဟုပေးသည်အတိုင်းအမျိုးသမီးအသံတစ်သံ-ကောင်းအာင့္၊ေမာ၊ဆိုလိုသည်'မိန်းမ'။ ထိုအမည်ကြောင့်ရှင်းလင်းခဲ့သူကိုဒီမှာဆို။ ကိုယ်ဝန်များ၊သင်ျ၊အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၊လူမှုနိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များအတွက်ရန္။ ဒါဟာပိုပြီးအရေးကြီးသည့်အခါဆွေးနွေးလူထုအတွက်-နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ရှုထောင့်။ ကောင်းမည္ဟုပေးသည်အတိုင်းအမျိုးသမီးအသံတစ်သံ-ကောင်းအာင့္၊ေမာ၊ဆိုလိုသည်'မိန်းမ'။ ထိုအမည်ကြောင့်ရှင်းလင်းခဲ့သူကိုဒီမှာဆို။
ဟေး၊သင့်အရုပ်၊တစ်စင်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လူငယ်တစ်ဦးအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အငယ်တစ်ဦးသည်လူ။ ဒါကြောင့်ရာင္စပ္ေ"၊ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ယောက်ျားလေးများအတွက်တိကျတဲ့အစည်းအဝေး၊ဒါပေမယ့်ငါကအကောင်းဆုံးပညာရေး၊ဒါကြောင့်မိန်းကလေးကဲ့သို့ရေးသားဖို့ငါ့ကိုအဖို့မှာအသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်။ အလုပ်ပြီးနောက်၊မကြာခဏပန်း(အောင်လျှင်ထို့နောက်သာတနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်ကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ကိုချွတ်ယူ၊အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးသင်တန်းလည်းမောင်းတယ်။ (အထူးသဖြင့်အပိုင်းရတဲ့အာဏာ၏ရှေ့နေထံမှအီးမေးလ်လိပ်စာပိုင်ရှင်က)အားဖတ္ျပီးလက္ခံပါသည္။ ဖတ်။ ငါသည်ငါ့ခွင့်ပြုချက်၏အပြောင်းအလဲငါ့ဒေတာနှင့်အညီ ။ ဤအအထူးသဖြင့်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်၊ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ငါသည်လည်းသဘောတူနှင့်အတူအပြောင်းအလဲအတွက်နိုင်ငံအပြင်ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာနှင့်အညီ၊။ (မမ)ဖတ်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူလိုက်လျောဒေတာတွေကိုအပြောင်းအလဲနှင့်အညီအနေနှင့်။ ဤအအထူးသဖြင့်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ အသွင်ပြောင်းအတွက်နိုင်ငံအပြင်ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြာနှင့်အညီ ။ (အထူးသဖြင့်၊ထိုဌာနရရှိကြောင်းအာဏာ၏ပိုင်ရှင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာ)၊အရာသင်ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်လက်ခံခဲ့ကြပြီ။ ဖတ်။ ငါသည်ငါ့ခွင့်ပြုချက်၏အပြောင်းအလဲငါ့ဒေတာနှင့်အညီ ။ ဤအအထူးသဖြင့်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်ဆက်စပ်ငါ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲလုပ္ထားသည္။ ငါသည်လည်းသဘောတူနှင့်အတူအပြောင်းအလဲအတွက်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မဟုတ်ကြောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာ၊အထူးသဖြင့် ရ ။ (နေနှင့်)ဖတ်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူလိုက်လျောဒေတာတွေကိုအပြောင်းအလဲနှင့်အညီ ။ ဤအအထူးသဖြင့်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်ကကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲလုပ္ထားသည္။ အသွင်ပြောင်းအတွက်နိုင်ငံအပြင်ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြာနှင့်အညီ ။ (အထူးသဖြင့်၊ထိုဌာနရရှိကြောင်းအာဏာ၏ပိုင်ရှင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာ)၊အရာသင်ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်လက်ခံခဲ့ကြပြီ။ ဖတ်။ ငါသည်ငါ့ခွင့်ပြုချက်၏အပြောင်းအလဲငါ့ဒေတာနှင့်အညီ ။ ဤအအထူးသဖြင့်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်၊ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ငါသည်လည်းသဘောတူနှင့်အတူအသွင်ပြောင်းသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပြင်ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာနှင့်အညီအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။ (မမ)မှဖတ်။ အချိန်၊ကျနော်တို့ရှိသည်ဖို့သဘောတူလုပ်ငန်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာနှင့်အညီ ။ ဤအအထူးသဖြင့်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်ကကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲလုပ္ထားသည္။ ပင်၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုတိုင်းပြည်အတွက်နိုင်ငံခြားငွေကြေး အပြင်ဥရောပစီးပွားရေးဧရိယာ၊အဆိုအ လက်ခံပြီး။ ရိုးရိုးရှာသည်ရက်ချိန်းနှင့်အတူလူငယ်တစ်ဦးအမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အငယ်တစ်ဦးသည်လူ။ အဘယ်ကြောင့်ငါရာင္စပ္ေ"၊ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ယောက်ျားလေးများအတွက်တိကျတဲ့အစည်းအဝေး၊ဒါပေမယ့်ငါကအကောင်းဆုံးပညာရေး၊ဒါကြောင့်မိန်းကလေးကဲ့သို့ရေးသားဖို့ငါ့ကိုအဖို့မှာဒီအသက်အရွယ်။ အလုပ်ပြီးနောက်၊မကြာခဏပန်း(အောင်လျှင်ထို့နောက်သာတနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်ကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ကိုချွတ်ယူ၊အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့ကောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးသင်တန်းလည်းခရီးသွားသအားဖြင့်ကား။ကွတ်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသွားမှာပါ။ဆိုက်ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်၊သင်သဘောတူကြောင်းဆိုက်.
တစ်သန်းနီးပါးလူတိုက်ရိုက်ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင်သူတို့ထဲကအများစုဟာအိမ်နီးချင်း။ သင်ထင်စေခြင်းငှါအမာန်တည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြ။ သန်းပေါင်းများစွာသူတို့နေဆဲအထီးကျန်။ လျှင်ပင်ဆွေမျိုးသားချင်းနှင့်မိတ်ဆွေများကိုတင်ပြခံစားခဲ့ရထီးကျန်နှစ်အဘို့၊နေ့တိုင်းအသက်တာနိုင်တော့သူတို့ကိုထောက်ပံ့။ ကျွန်မဖခင်နေထိုင်ခဲ့၊နောက်ဆုံးမှာသူကသွားသို့အသီးအရွက်များ။ သူမြင်မှဖာ၊အိပ်ပျော်ကြ၏။ သူမရှိသလောက်မြင်။ မရှိသလောက်ခဲ့သူအခြားလူတို့အားပြောဆိုရန်သူနိုင်ခဲလှ၏စကားပြောဖို့အခြားမည်သူမဆို။ သူ၏အထီးကျန်ပြည့်စုံခဲ့၊သူသည်ဖျက်သိမ်းအပြန်ခရီး။ ပိုကြုံတွေ့ထီးကျန်၊အထူးသဖြင့်လူသားတို့အတွက်:သင်ခံစားရငါးအထီးကျန်နေသူတို့ကို။ ပြဿနာ၊သို့သော်၊အချို့သောအချိန်များ၊အမှုမရှိတော့ဖြစ်စဉ်တို့တွင်အသက်ကြီး။ သုတေသနများကြောင်းပြသမှာဆယ်အထီးကျန်ဂျာမန်အထီးကျန်ခံစားရ။ ကျွန်တော်ဟာတယောက်တည်း အနှစ်၊ပင်အရာ။ အထီးကျန်နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်ရှိမရှိအသက်ရှင်သူသည်လူများတည်းရှိသည်အနည်းငယ်မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းအတွက်အထီးကျန်ဒေသများ။ ပိုမိုလေ့လာပါရန်:အချိန်မှသေဆုံးမီအသင်သေဆုံး:အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းပြသည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုအတွက်အဟောင်းအသက်အရွယ်။ လူတည်းနိုင်သောအများကြီးအခြားလူများနှင့်အတူ၊ဒါပေမဲ့သူတို့မရှိခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်။ အထီးကျန်ခံစားနေရ။ ဒါကြောင့်သုတေသီများအဆိုအတိုင်း၊စိတ်ပညာ၊စောင်း ။ နာတာရှည်အထီးကျန်၊ပြင်းထန်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်အနိမ့်သက်တမ်းလေးအတွက်မကြာသေးခင်ကဆောင်းပါး၏အဆိုအရစစ်တမ်းကောက်ဗြိတိန်တွင်တဲ့အခါ၊ဆေးလိပ်မသောက်စီးကရက်၊အထီးကျန်အဖြစ်အလွန်ကြီးစွာသောတစ်ဦးအဖြစ်ဂရမ်၏ကျန်းမာဖိနပ္မ်ားတစ်နေ့လျှင်။ စိတ်ရောဂါမာတင် ဝင်အထိဖြစ်ကြောင်းပြောဖို့အတွက်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်နံပါတ်တစ်အကြောင်းရင်း၏အသေခံသည်အထီးကျန်။ အမေရိကန်လေ့လာမှု၏အနှစ်အကြောင်းကပြောပါတယ်ကြောင်းသတစ်ခုတည်းသောလူမျိုးဖြစ်ကြနှစ်ကြိမ်မှခံဖို့အဖြစ်မပြောင်းနှောက်အထက်ဆား။ ဆရာ၏စိတ်ပညာ တွေ့ရှိနှစ်ခုအတွက်အဓိကအသုတ်အပြင်ဘက်ပြုလုပ်ဖြာသောအထီးကျန်တဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေအလားတူခြိမ်းခြောက်အဖြစ်အဝလွန်ဖို့အမေရိကန်လူဦးရေရဲ့။ အထီးကျန်တစ်ဦးစီးရီးအကြမ်းမဖက်ခတ်အသက်တာ၌အပြောင်းအလဲအလူမႈအထည်၊ေျပာ ။ ဤပါဝင်သည်ခခ်၊ခြာ၊သို့မဟုတ်သေခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်၊အဟောင်းတွေအမျိုးသမီးများကိုမကြာခဏဆင်းရဲခံရ။
သင်ယူဖို့အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏၊သင်လိုအပ်လိမ္ျ။ ပေါ်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိမ္ျသာ၊အမှန်တကယ် လိုကောက်နှင့်အတူပါဝင္သည္၊သာခိုးယူခံရဖို့၊အဖြစ်ရုတ်တရက်တွေ့နှင့်အတူမိမိကိုယ်ကို ချည်နှောင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကည့္လ်က္။ ပေမယ့်သင်ချင်ကြပါဘူးအကယ်၊နောက်တဖန်အ၊ကျွမ်းသူတို့အကြား။ နိုင်ချေ၊အစားအစာနှင့်ရရှိသည့်ကြေညာချက်၊ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကအတွက်။
သာပထမတစ်ချက်မှာပုံရတဲ့လူတွေကမပြောင်းဘူး။ ဟုတ်ကဲ့၊မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ထဲက၏အမြင်ဒဿနပညာရှင်၊သင်မြင်သောငါတို့သည်နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ကြောင်းအတူတူပြဿနာများနှင့်၊ကျနော်တို့အတူတူပင်အမှား၊ကျနော်တို့ဖြစ်ကြသည်၊တကယ်တော့၊ညီသောအရာကိုရှာနေ-ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပ၊နှင့်နွေးထွေးနှစ်သိမ့်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုအပ်ပါတယ်၊တစ်ဦးကောင်းအလုပ်အိမ်မှာ-တစ်ဦးအပြည့်အဝကြီးမား၊စုစည်းခွက်နှင့်ကျန်းမာသောမိသားစု။ ကောင်းပြီ၊ဒါဟာအရေးကွီး၏တန်ဖိုးစနစ်၊အဝင်အမှန်တကယ်ချစ်တဦးတည်းနှင့်အစွမ်းကိုအဘယ်သို့ပြု၊ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊နှင့်အနည်းငယ်အချိန်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနည်း၊ချစ်ဖို့၊ရပ်တန့်နှင့်ပျော်ရွှင်စေကြောင်းအရာအားလုံးအပြင်သွား။ သင်သည်နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်အကြောင်းမတိုင်းမျိုးဆက်သည်အကြင်နာမဲ့။ ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးအဘွားတွေဟာရူးသွပ်လောက်မိသားစု၊ပါတီကဖိတ်ခေါ်လူတွေအများကြီးမှအနီးနှင့်ဝေးပြည်ပမှာ၊ဆွေမျိုးသားချင်းများလျှင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်နှင့်အဖေရုံပြုသူတို့ဘာလုပ်ခဲ့ယခုတိုင်ဒေသရှုခင်းများထံသို့ချဉ်းကပ်ပြီးရုပ်ရှင်ရုံ၊ထို့နောက်ကျနော်တို့အဘယ်သူသည်ပြင်းအပေါ်ကျောက်ပြားကိုအဘို့အပထမဦးဆုံးနှင့်အတူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအခြားဘက်ခြမ်းတွင်၊ပိုလိုချင်တယ်၊ကျနော်တို့အားလုံးကိုလိုချင်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်ကြောင့်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံ၊တစ်စုံတစ်ဦးကသာအမှန်တကယ်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်သာမန်မိုဘိုင်းဖုန်းမှာလက်၊ဖွင့်ပွဲဝင်ရောက်ခွ။ ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ ကပိုရိုးရှင်းပြီးခွင့်ပြု၊သင်တို့အဖို့အလုပ်အတုကမ္ဘာအဝှမ်းခရီး။ အခါတိုင်းသင်ကျပန်းချိတ်ဆက်ဖို့ကမ်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမျှတတဲ့လိင်၊ဒါကြောင့်ပြသထားမသာ၊ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ပတ်ဝန်းကျင်:နေ့စဉ်ဘဝ၊ယဉ်ကျေးမှု၊ဘာသာစကား။ အားလုံးတူဗီဒီယိုချက်တင်အစီအစဉ်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ အပေါင်း၊ချက်တင်ကစားတဲ့နိုင်လွှင့်ရန်ပုံများကိုပတ်ပတ်လည်နာရီဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ့အမှ၊မြင့်မားသောအရည်အသွေး၊လမ်းဖြင့်၊မတစ်ခုတည်းသောအသွင်အပြင်နဲ့အသံကိုအသုံးပြုသူ၏၊ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ပတ်ဝန်းကျင်။ အခုဆိုရင်အင်တာနက်ကိုအတွက်လေထု၊ကစားတဲ့ ၁၈ အပေါင်းဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များဖွင့်လှစ်နိုင်ပါတယ်မည်သည့်စီးပွားဖြစ်စင်တာ၊ဖီးသို့မဟုတ်ကမ်းခြေ:သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက်၊ကျနော်တို့မရှိတော့များမှာအားဖြင့်ကန့်သတ်။ ဒါဟာနှုတ်နှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်အတင်းကျပ်မူဘောင်အတွက်ကလွဲပြီး၊အသက်နှင့်အလိုဆန္ဒမှပြောကျေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု။ ဒါဟာသတိပြုသင့်ကြောင်းကိုပိုင်ထိုက်သောအမျိုးသားစိတ်ဓာတ်လည်းအကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားဤကိစ္စတွင်အတွက်၊ပြီးလျှင်စကားပြောရာအရပ်ကိုကြာ၊ဥပမာအားဖြင့်၊အင်္ဂလိပ်အတွက်၊ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမမည်သည့်စကားမွတ္ခ်က္မ်ားဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်မှာနေသောတပါးအကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိရုရှားဘာသာစကား။ ဝင်ရောက်ခြင်းသည့်အခါတစ်ဦးကဗီဒီယိုနှင့်အတူစကားပြောမိန်းကလေးငယ်များ ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်၊အတိအမြင်နှစ်ခုစလုံးကိုပရိဘောဂအတွက်မိမိတို့အအခန်းပေါင်း၊နှင့်စတိုင်ကသူတို့လိုက်နာဖို့အတွက်အိမ်သို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့။ တခါတရံဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်၊တခါတလေမသိပ်။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌ သင်လိုအပ်အလျင်အမြန်ထွက်ပေါက်စကားေျပာရှာဖွေနေအဘို့အသစ်တစ်ခု ။ ကစားတဲ့ ၁၈ စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမနှောင့်ယှက်လိမ့်မည်လျှင်သင်၌ထားခဲ့ပါ။ ကောင်းပြီ၊တစ်ခါတစ်ရံအဆင်ပြေသောအခါတစ်မိန်းကလေးအရမ်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောသို့မဟုတ်သင်လည်းရှက်။ ခေတ်သစ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နှင့်အချိန်မပါဘဲမရှငျနိုငျတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်း။ တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်နိုင်သူတို့ကိုရှာတွေ့မှစစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ ကြိုးစားအိပ်ပျော်နှင့်အတူအသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်။ သူတို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသင်ရှိပါတယ်များအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ခန့်မှန်းရခက်နှင့်ပြည့်စုံ၏အံ့သြဖွယ်။ အခါသင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရဖူးပါတယ်အားလုံးမျှော်လင့်၏အောင်မြင်မှုကိုသင်သည်သင်၏ရှာဖွေရေးအတွက်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်၊ကံကြမ္မာဆဲတတ်သင်ဖို့အခွင့်အလမ်း။ ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ ပေါင်းဘဲ၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို-တစ်ဦးလဲလှယ်၏အကြံအစည်နှင့်ခံစားချက်၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အအေးဆေးလေထု၏။ သင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ပျင်း။ ဆိုပါကယခင်ပီမထင်၊သင်အပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့အနောက်တယောက်နှင့်ဆက်လက်ဆက်သွယ်နှင့်အတူအဓိကဇာတ်ကောင်။
ငါဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်အတူကစားတဲ့အပေါ်ကျွန်မ သို့မဟုတ်အိုင်ပက်ဒ်။ အဘယ်သူမျှမ၊အဲဒီကိရိယာမရှိဘူးဗီဒီယိုပါ။ ထားခဲ့သင့်မေးခွန်းများအတွက်မှတ်ချက်များအပိုင်း။ တုံ့ပြန်မှုပေါင်းစည်းလိမ့်မည်။ ချင်သောသူတို့အဘို့ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္မိမိတို့အဗီဒီယို။ အကယ္ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ထို့နောက်: )ကြိုးစား စာမျက်နှာမပါဘဲကျွန်းစုသုံးပးႏုိင္ပါတယ္။ ) စာမျက်နှာမပါဘဲအခါႏွဘဲအကူအညီကြိုးစား၊ပိတ်ပွဲအရာက္ဇာ(တစ်ခုလုံးကိုအက္ပ္ကိုမချက်တင်စာမျက်နှာ)၊အဖွင့်၊နှင့် ကိုချက်တင်စာမျက်နှာ။ )ဆိုရင်ပြန်လည်အရာက္ဇာပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးပါဘူး၊သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအခါႏွအရာက္ဇာခ််ိန္ညႇ်ိခ်က္။ များစွာသောခေတ်သစ်ဘြတ္အခ်က္အလက္မ်ားျပမ်က္ႏွာျပင္ပးႏုိင္ပါအတွက်သမိုင်းနှင့်ခါႏွသန့်ရှင်းရေးဒိုး(စရာမလိုစစ်ဆေးအခါႏွဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့၊အညိွႏိႈင္း)။ ပြီးနောက်သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအခါႏွ၊သငျသညျဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းအချက်တင်စာမျက်နှာ။ အကယ္ပ္လိုက္ပါလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊သင်လိုအပ်သမျှသိရန်အွန်လိုင်းအကိုရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ရာက္ဇာခဲ့သည်။ ချက်တင်"မပေးပါဘူးအပေါ်အကြံဥာဏ်ရှင်းလင်းအခါႏွအတွက်အချို့သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဗားရှင်းများကွဲပြားခြားနားသော။ )အားလုံးအထက်ပါအဆင့်များဘူးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစား၊ကုန်တင်အချက်တင်စာမျက်နှာအတွက်ကွဲပြားခြားနား။
-ဤမေးခွန်းလွှာမှမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ။ ငါရှာဖွေနေများအတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အတွက်ချစ်ကြည်ရေး၊အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊တစ်မိသားစုမစတင်။ တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်စတင်သိရန်ရတဲ့နှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာရှိခြင်း။
နှင့်ယခုအဘို့အပျော်စရာအစိတ်အပိုင်း။ ကျနော်တို့ဖွင့်။ နှင့်၊သင်သိသည့်အတိုင်း၊လုပ်ရပ်ပြတ်ပြတ်နှင့်တင်းကြပ်စွာအဆိုအရအဆိုပါအစီအစဉ်။ အားလုံးသုံးသူတို့၏နေအိမ်နှင့်အတူသူတို့အကြိုက်ဆုံးမစ္ကီေမာက္စ္တီရွပ္။ ရဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်၊လက်နက်ကိုအသွားဘယ်တော့မှဆုံးရှုံး။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ထိုအခါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မစ်ရှင်၏အပိုင်းအစ၊ငါကယူ။၊အထုပ်ပိုး။ အရပ်ရှည်ရှည်အနက်ရောင်ဆံရှင်နှင့်အတူတစ်ဦးအဖုံးကျန်းမာသောဆံပင်ရွှေရောင်နှင့်အတူတစ်စောင်ကိုနားလည်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များပင်မှာညလုံးမ်ား။ သူတို့ကိုအောင်နိုင်အောင်သူတို့ကိုအန္တရာယ်ကင်း။ ဟုတ်တယ်၊ကျွန်မတို့လုပ်ငန်းများရှိရာ ပဲအချင်းချင်းသိရန်အခြား။ နယူသုံးစက္ကန့်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများပါယာအဖြစ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအထင်ကြီးပြီး၊ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တရများနှင့်အမှတ်တရမာနထောင်လွှားနှင့်အတူမှန်နှလုံးအတွက်။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးနေ့စွဲအပေါ်သွား။ ကြီးမြတ်သွင်တိုင်းတာတဲ့အညွှန်းကိန်း-ရှာနေအတွက်ကြေးမုံ၊သင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပိတ်ရန်ဤဂုဏ်အားဖြင့်ချိန်း၊ဟာသကိုခံစား၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု။ မပန်းရ၏ထပ်ကျော့အကြောင်းအရာအမျိုးသမီးလေ့လာသင်ယူရန်၊ပွင့်လင်းဘူးခွံသခွားသီး၏မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အညီ၊အဘယ်သူမျှမဒွိဟ၊ကိုအလွယ်တကူဖြည့်ဆည်း။ နှင့်ဤသင်မြင်ရတဲ့အကောင်လေး နှင့်အတူ၊သငျသညျချဉ်းကပ်မှု၊အောင်ချီးမွမ်းတစ်ဘီယာနှင့်အတူသူ့ကိုအတွက်အားကစားဘားတန်းကိုမသောက်ရန်။ နောက်ပြီးသံသယမရှိနိုင်ဖန်ဆင်းတော်တစ်ဦးကမ်းလှမ်းချက်ကို။ မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ရာတစ်ခုခုကို။ ဟုတ်ကဲ့၊ကျနော်တို့ကအများကြီးပိုပြီးရင်ခုန်စရာအကြံဉာဏ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးခေါင်း။ ဒါဟာအလွန်ဖွယ်အလားအလာ၊အဘယ်သူမျှမ။ စေရဲ့နောက်ကျောအခြေခံမှရယူပါ။ သင်ကဲ့သို့၊သင်တန်း၏၊လူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၊သဘာဝအားဖြင့်သင့်ရဲ့မုဆိုး။ လူတို့မကြိုက်ဘူးဝယ်ဖို့ငါးအတွက်စူပါမားကက်၊ သူတို့ငါးဖမ်းသွား။ အမျိုးသားများအချစ်ပြိုင်ပွဲမှရှောင်ရှားရန်ပြိုင်ပွဲနှင့်အနိုင်ရ။ အဆိုပါအချက်အပွင့်လင်းဂိမ်းဖြစ်ဖမ်းနိုင်ရ။ ပြီးလျှင်သင့်ကိုယ်သင်၊သင်တက်လာသော၊သင့်ရဲ့အဘို့ကိုမေးမြန်းဖုန်းနံပါတ်ပေး၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဆိုအမှု၌၊အဘယ်ကြောင့်ပေးတဲ့ဆုမှာဂိမ်းရဲ့အစ၊စားစရာအဘို့ဆက်ပြီးမှ။ စေသူ့ကိုယူပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်ပြီး၊ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပြုမူရန်။ ထိုအမှတပါး၊စိတ်ပညာသက်သေပြခဲ့ကြသောအရာကိုသင်အနိုင်နိုင်ကိုင်သင့်လက်၌တန်ဖိုးထက်ပိုပြီးအကြောင်း၊ဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲကတန်ဖိုးရှိတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အခက်အခဲဤကိစ္စတွင်အတွက်ကျွမ်း။ အတွက်နှစ်ဦးစလုံး၊အရာအနည်းငယ်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုများအားကျော်လွှားသင့်ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ကြောက်ရွံ့ခြင်း၏ပျက်ကွက်၊နှင့်အလုပ်ကြောင့်လူသိများ။ ဒါကြောင့်တက်ဖို့သူ့ကိုဒီလိုလုပ်ဖို့ကွက်-ကြကုန်အံ့၊သူ့ကိုအဘို့ဆုံးဖြတ်ပါ။ အခြားအငြင်းအခုံ၏မျက်နှာသာအတွက်သောအချက်ကိုအစပြုမှလာသင့်။ ကြည့်ကြရအောင်အခြေအနေကနေစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရှုထောင့်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိရရောင်းသူ၏တရုတ်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးမေးခွန်းထုတ်စ၊သူသွားနေအိမ်မှအိမ်နှင့်ပေးကမ်း၊လှည့်စား၊အဝယ် အံ့ဖွယ်အ-တူတစ်ကြော်ဒယ်အိုး၏ထိပ်ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်ပင်နှိပ်ဓာတ်မီးနှင့်အတူအစားဆံပင်လေမှုတ်စက်၏။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုမဝယ်လိုအားအတွက်၊ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြောင့်ဝယ်ယူရန်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ရောင်းဖို့နိုင်ရန်အတွက်ထုတ်ကုန်များ၏အများကြီးအကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး၊သင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးမည်သူမဆိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်း။ ဝယ်မိမိဝန်ခံသောဤသည်တူညီသောအရာနှင့်သိက္ခာကိုကိုယ်ပိုင်တယ်။ သူကိုဝယ်ခြင်းငှါလိုလား၊မရောင်းသူမှမိမိနေအိမ်နှင့်အတူ၊ခံယူ။ အမည်ကိုကြည့်ပိုပြီးအလိုရှိသည့်အခါသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအရေအတွက်တစ်ဖက်နှင့်ဖိတ်ကြားရန်အစည်းအဝေး:သူကကိုမြှင့်တင်ရန်မိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့်အားလုံးဆိုလို၊သို့မဟုတ်တဦးတည်းအဘယ်သူကိုများအတွက်မှူးမတ်တို့သည်မိမိတို့အမည်မှကမ္ဘာ၏အဆုံး။ သို့သော်မဆိုလိုပါဘူးကြောင်းသင်၏လက်ကိုတင်ပြီးစောင့်၊စောင့်၊စောင့်။ သင်၊သင်မစိုက်နေဖို့။ သင်ရုံဖြစ်ခြင်းအလွန်သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အလွန်အာရုံစိုက်။ ဒါကြောင့်၊အဆိုပါမဟာဗျူဟာတီထွင်ခဲ့ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်၊အဆိုပါအချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်စီစဉ်၏။ တောင်မှအလှဆုံးဖုန္စုပ္စက္အတွက်ကမ္ဘာမဖြစ်ဖို့စိတ်ဝင်စားမည်သူမဆိုလျှင်အဘယ်သူမျှမသိတယ်။ ဒါကြောင့်၊ရဲ့ပြောဆိုကြကုန်အံ့တဖန်ဟူသောအချက်ကိုအမျိုးသားများအတူကြည့်ရှုပါရန်အဘို့ပစ်မှတ်နှင့်အလိုရှိသူတို့ကိုအသူတို့ကိုယ်သူတို့။ အဓိကရည်မှန်းချက်၊ဒါကြောင့်သူကကိုတွေ့ချင်လိုက်တာ။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်။ သူကဒါကိုလုပ်ချင်ကြတယ်၊သူတိပြုမိသင့်ပါတယ်၊နှင့်သင့်အကျိုးစီးပွား။ နေတယ်ဆိုရင်၊ဥပမာအားဖြင့်၊တစ်ပါတီ၊အခေါက်အပေါ်မိမိ၏လယ်ပြင်မြင်နဲ့ပြောနေတာမှတစ်စုံတစ်ဦးက၊သင်သတိထားမိလျှင်သူ့ကိုအတွက်ကဖေး-အရှေ့တွင်အမျိုးသမီး၏'ခန်းနှင့်အပြန်၊အဖြစ်ကောင်းမတော်တဆအကြောင်း၊သူ၏ဆိုးယုတ်။ အခါသူသည်အမြင်၊အချိန်ရဲ့မျက်လုံးချင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ။ သင့်အကြည့်ထိန်းနှစ်စက္ကန့်ဂန္၊ဒါပေမယ့်ထိရောက်သော၊ကြိုဆိုပါတယ်။၊ ဒါဟာဖြစ်စေခြင်းငှါလွယ်ကူပြုံးစေဖို့သူ့ကိုနားလည်ပါတယ်ဖွင့်ထားသည့်သဘောတည်ဆောက်ခြင်း၊သင်သည်မည်သည့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်တိုင်းစကားပြောဖို့သင်၊သင်သည်မည်သည့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလေဓာတ်ငွေ့သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ။ သူသတိပြုမိ၊သင်သိသာထင်ရှားစွာကြိုက်တယ်၊ကိုယ်တောင်ပြုံးမှာသူ့ကို-လုံလောက်။ အခုသူ့အလှည့်အသွားကိုအပေါ်ထိုးစစ်။ ပြီးပြည့်စုံသောအဘို့အနောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊သူလာတက်တယ်၊မေးတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့စပြောပါ။ ဤသည်အရေးအပါဆုံးအချက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစျခုလုံးကိုစစ်ဆင်ရေး။ နောက်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်။ ဖယ်ရှား၏အမျိုးအပေါင်းတို့ကိုမိမိယက်ပြုံးဖို့လက်နက်တွေသိမ်မွေ့သော၊ခေတ်မီမော်ဒယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊ဟာသကိုခံစားတဲ့အလွန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ။ နာမည်ကျော်အီတလီလုပ်ငန်းရှင်၊အဘယ်သူ၏ကံကြမ္မာသည်ခန့်မှန်းဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ ဖြစ်ဒါရိုက်တာအမည် ၁၊ ၊ကပြောပါတယ်:"သင်ချစ်ကြိုက်မိတယ်၊၊အမျိုးသမီးတစ်ဦးလုပ်သင့်တယ်ငါ့ကိုရယ်။ အများကြီးရှိပါတယ်လှပချစ်စရာမိန်းကလေးငယ်များ၊ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်၊သင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ သင်မူကားထိုသို့ပြု။ ဒီတော့ကြိုးစားဖို့ဟန်ကြောင်းမှာဗျူးနှင့်အိမ်မှာအတိအကျသုံးမိနစ်အကြာက၊ဒါကြောင့်သူတို့စိတ်ဝင်စားဖြစ်လိမ့်မည်သင့်ရဲ့အလားအလာအလုပ်ရှင်။ သာစေကြောင်းသဘောပေါက်ကြပါဘူးလိုအပ်ရှိသည်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊နှင့်ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြေအနေကိုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။ သူကကြည့်ပြီးသင်နှင့်သင်ပြီးသားအပြုံးမှာအခြားတစ်ယောက်ယောက်၊သို့သော်သူကိုက်ညီဘူးနှင့်ကိုက်ညီဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်းသူပြီးသားရှိပါတယ်။။။။။ နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကပဲရှက်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူယုံကြည်အခြေအယူအစပြု။ လက်ရအဖြစ်နီးစပ်ပထမဦးဆုံးတဦးဖြစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည်၊သင်တန်း၏၊ကြိုးစား၊ဒါပေမယ့်သင်ဟာဘာကိုမျှော်လင့်လို့ရနိုင်မှဤမင်းသား၏စွမ်း၊သူလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မကျော်လွှားမလွန်နှင့်ငါးမီတာအမြင့်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်စင္ဒရဲ့အောင်မြင်ခဲ့လို့ပါသိသောအခါထူးဆန်းစွာသိမ်း။ ပြီးနောက်သင်သတိပြုမိကြောင်းမှပြောဆိုရန်ကောင်းတဲ့င်၊သင်ခံစားရသောအချိန်တွင်။ ပန်၊အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုပြောပြပါသင်အချိန်များအတွက်၊ပြီးရင်ခင်ဗျားမှာတစ်ပါတီ၊ငါ့ကိုပြောပြရန်လိုအပ်တစ်စုံတစ်ဦးမှပြောဆိုရန်ထားခဲ့ပါ။ ရှိနေတဲ့ခံစားချက်ကိုဆုချီးမြှင့်ခဲ့သောဒီတော့အနီးကပ်နဲ့အရမ်းကိုလှပနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်မဲ့ယူသွားကွယ်ပျောက်တော့။ သော်လည်း။ ပြီးနောက်၊သူသည်ချက်ကြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့သင်ပြန်မေးသင်ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်ထွက်။ နှင့်အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွေအကြောင်းသင်ဖူးဖတ်ပြီးသား။ ကံကောင်းပါစေ။
ပုံသေထိအမှတ်အသား။ ဒီအထူးတည်နေရာအပေါ်ဘော့နှင့်အလိုအလျောက်ပေးပို့ကြောင်းကိုအချက်အလက်အရေအပူချိန်ကို။ သူတို့အများဆုံးတိကျမှန်ကန်နှင့်အစဥ္။ အပူချိန်အိုးတံဆိပ်အပေါ်အလေးတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံကိရိယာများတပ်ဆင်ထားပါသည်ပေါ်အပျော်အပါးယာဥ္မ်ား၊နှင့်လမ်းအပေါ်၊ဤစစ်ဆေးရေးထွက်ယူသွားတတ်မှာအတိအကျအရေအပူချိန်တိုင်းမီတာ ၅၀၀။ နေစဉ်သင်္ဘောသည်စာရေးကိရိယာများ၊အချက်အလက်လက်ခံရရှိတိုင်း ၂ နာရီ။ သင်နှိပ်တဲ့အခါထိုမြေပုံပေါ်တွင်တံဆိပ်၊ကားဖုန်းများပြသထားသည်အားလုံးနှင့်အတူရေကိုအပူချိန်တိုင်းတာချက်များ။ သင်နှိပ်တဲ့အခါတစ်ဦးအပေါ်စက်၊အသုံးျပြသသောအပူချိန်နှင့်တိုင်းတာချိန်။ အ ၏တစ်ဂိတ်အလိုအလျောက်ပြုပြင်မွမ်းမံများအတွက်ရေယာဉ်ဖြတ်သန်းထိုကဲ့သို့သောတစ်အချက်။ အချိန်ကိုစစ်ဆေး နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္ထက္၊ခိုးယူတွေအများကြီးဥတုဂြိုဟ်တုယူပူချိန်ရုပ်ပုံများ၏ကမ္ဘာ၏မျက်နှာပြင်-ကျွန်တော်တို့အခ်က္အလက္မ်ားျပမ်က္ႏွာျပင္ဤအချက်အလက်။ သတင်းအချက်အလက်သည်နေ့ချင်းညချင်းနှင့်သာပြသနေတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပုံ၏ပြီးသားထွက်-ရက်စွဲအချက်အလက်များ၏မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်မမူသောအဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက် ၆ နာရီပေါင်း။ ဒီသုံးတဲ့အမှတ်အသား၊အစီရင်ခံစာအတွက်ရရှိနိုင်
A német nőket,atudás,amentalitás, illetve tulajdonosi
ဗီဒီယိုချက်တင် ၁၈ မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့အပေါင်း ဗီဒီယိုအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ တွေ့ဆုံရန်ဖို့မှတ်ပုံတင် ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူယောက်ျားတွေ လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့ ဝဘ်ချက်တင်ကစားတဲ့ ဗီဒီယိုချက်တင်ဆိုဒ်များချိန်းတွေ့ ပုဂ္ဂလိကဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ ချိန်းတွေ့ဓါတ္ပံုဗီဒီယိုအခမဲ့